नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भारतीय दुत श्याम शरण खुसुक्क नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रचन्ड र देउबासँग भेट गरे, नक्साका लागि संबिधान सँसोधन गर्न लागिएको सँसदको कार्य सुची एकाएक गायब !
भारतीय दुत श्याम शरण खुसुक्क नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रचन्ड र देउबासँग भेट गरे, नक्साका लागि संबिधान सँसोधन गर्न लागिएको सँसदको कार्य सुची एकाएक गायब !
भारतीय दुत श्याम शरण खुसुक्क नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रचन्ड र देउबासँग भेट गरेको कुरा फुत्तै बाहिर आयो । फलस्वरुप नक्साका लागि संबिधान सँसोधन गर्न लागिएको सँसदको कार्य सुची एकाएक गायब भए पछी "कठै हाम्रो राष्ट्रबाद !" भन्दै जनता आक्रोसित हुन थालेका छन । नक्कली राष्ट्रबादको उन्माद नेपालमा अहिले देखी होइन धेरै पहिला देखी देखिँदै आएको थियो । अहिले आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । पछील्लो समय ओली सरकारले ल्याएको नक्सा राष्ट्रबाद एक हप्ता नहुँदै तुहिन शुरु गरेको छ भने अब आरोप प्रत्यारोपको नाङ्गो नाच शुरु भएको छ । देश जोक्करहरुको रणभुमि भएको छ भने तिनका पछी लाग्ने दलेहरु खण्डन गर्न सामाजिक सन्जालतिर कृयाशिल हुन थालेका छन । डोकोले छोपेको बिराली म्याउँ गर्न किन छोड्थ्यो र भने झै भएको छ । आरोप प्रत्यारोप यसरी पोखिन थालेका छन :
उता भारतीय मिडियाहरुले यसरी लेख्न थालिसकेछन !!
नक्शा विवाद में पीछे हटा नेपाल, भारत के हिस्सों को नक्शे में दिखाने का प्रस्ताव वापस
भारत के कुछ भूभाग को समेट‌ कर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने इस संबंध में संसद में पारित होने वाले प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया है.